मासु खाने गाईको दूधका विषयमा चर्का चर्की विवाद – अब के होला निष्कर्ष ? – tvNepali.net
मासु खाने गाईको दूधका विषयमा चर्का चर्की विवाद – अब के होला निष्कर्ष ?
अमेरिका तथा युरोपका कैयन् देशमा गाईलाई खुवाइने दानामा गाई, सुँगुर तथा भेँडाको मासुका साथै रगत पनि मिसाइएको हुन्छ । गाईलाई खुवाइने त्यस्तो दानालाई ब्लड मिल पनि भनिन्छ । अमेरिका चाहन्छ कि भारतले अमेरिकाबाट धेरैभन्दा धेरै दुग्धजन्य उत्पादन खरीद गरोस् । तर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले गर्दा भारतले अमेरिकाको त्यो चाहना पूरा गर्न चाहँदैन । वास्तवमा मासु खाएका गाईको दूधबाट बनेका कुनै पनि चिजहरु आफ्नो देशमा आयात तथा प्रयोग गर्न नसक्ने भारतको भनाइ छ ।
मासु खाने गाईका दुग्धजन्य उत्पादन खरीद नगरेकै कारण अमेरिकाले हालै भारत विरुद्ध कडा कदम चालेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतलाई व्यापारमा सहुलियत दिने मुलुकको सूचीबाट हटाएका छन् । अमेरिकी सामानहरुलाई आफ्नो बजारमा पहुँच दिने कुराको भारतले आश्वासन नदिएकाले भारतलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाएको ट्रम्पको भनाइ छ । उक्त सहुलियतबमोजिम भारतले साढे ५ अर्ब डलर बराबरका आफ्ना उत्पादन बिना भन्सार अमेरिकामा निर्यात गर्न पाउँथ्यो ।
उता भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले ब्लड मिल खाएका गाईको दूधबाट बनेका चिजहरु खरीद गर्न नसकिने कुरा अमेरिकासँग प्रष्ट रुपमा राखेको जनाएको छ । अमेरिकाले भारतमा बेच्ने दुग्धजन्य पदार्थहरु ब्लड मिल नखुवाइएका गाईवस्तुबाट उत्पादन गरिएको कुराको प्रमाणित कागजात पेश गर्नैपर्ने शर्त भारतले राखेको छ । सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यता र संवेदनशीलताका कारण यसो गरिएको र यस विषयमा कुनै सम्झौताको गुञ्जायस नरहेको उसको भनाइ छ ।
के हो ब्लड मिल ?
वधशालामा मासुका लागि काटिने गाईवस्तुको मानिसले नखाने खालको मासु र हड्डीका टुक्राहरु पिँधेर त्यसमा रगत घोलिसकेपछि त्यसलाई उच्च तापक्रममा सुकाएर विशेष खालको दाना तयार गरिन्छ । त्यस्तो दाना लाइसिन नामक एमिनो एसिडको राम्रो स्रोत हो । गाईको दूधमा पर्याप्त प्रोटिन हुनका लागि गाईलाई खुवाउने दानामा उक्त एमिनो एसिड अनिवार्य हुन्छ ।
पश्चिमा देशहरुमा गाई फार्महरुमा पालिने गाईलाई हृष्टपुष्ट राख्न तथा प्रसस्त दूध दिने बनाउनका लागि ब्लड मिल खुवाइन्छ । दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले दूध उत्पादन बढाउन नसकेपछि विदेशबाट उन्नत नस्लका गाई ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। भारतबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने प्रयास असफल भएपछि चीनबाट उन्नत गाई ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले चीनको कृषि यान्त्रीकरण विज्ञान प्रतिष्ठानको सहयोगमा उन्नत नस्लका गाईसहित नयाँ परियोजना ल्याउन पहल सुरु गरेको छ।
सरकारले आगामि दुई वर्षभित्रमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको छ। उन्नत नस्लका गाई नहुँदा अपेक्षाकृत दूध उत्पादन बढ्न नसकेकाले चीनबाट उन्नत नस्लका गाईसहित नयाँ परियोजना ल्याउन पहल भैरहेको विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कैलास ढुंगेलले बताए। ‘किसानको माग अनुसार उन्नत नस्लका गाई दिन सकेका छैनौं,’ ढुंगेलले भने, ‘दूध उत्पादन बढाउन ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं।’ उनले दूधको ठूलो मुहाननै खोजेको दाबी गरे। विभिन्न माध्यमबाट चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। भारतले उन्नत जातका गाई नेपाल निर्यातमा रोक लगाएपछि विकल्प खोजिएको हो। भारतले गाई निर्यात गर्न कानुनी रूपमा नै रोकेको छ।
बोर्ड र निजी क्षेत्रको पहलमा चीनबाट गाईसहित डेरी क्षेत्रमा काम गर्न परियोजना ल्याउन पहल भएको पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले बताए। ‘बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चीनसँग छलफल अघि बढाएको भए पनि केही प्रक्रिया मिलेकेा छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सरकारले निर्णय गर्‍यो भने कार्यान्वयनमा आउँछ।’
दूध उत्पादन बढाउने र बजार व्यवस्थित गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेको पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। दूध उत्पादन बढाउनको लागि एक जिल्ला एक घाँस उत्पादन, उन्नत नस्ल सुधार, डेरीमा पूर्वाधार निर्माण लगायका कार्यक्रम ल्याएको पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘दूध उत्पादन बढाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले भने, ‘दूध उत्पादनपछि अनुदान दिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।’
बजार मागको तुलनामा २० प्रतिशत दूध अभाब रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए। ‘भूकम्पपछि दूध उत्पादन घट्यो,’ केडियाले भने, ‘त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छ।’ भूकम्पको बेला दुधालु गाई,भैंसी मरेकाले पनि यो अवस्था सृजना भएको बताए।
नेपालमा वार्षिक उत्पादन हुने १७ लाख २४ हजार मेटि्रक टन दूधमध्ये गाईको दूध पाँच लाख ५७ हजार मेटि्रक टन र भैंसीको दूध ११ लाख ६७ हजार मेटि्रक टन रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा ७२ लाख ४१ हजार गाई पालिँदै आएको पशुपक्षी विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी भैंसीको संख्या ५१ लाख ६७ हजार छ। भैंसीको तुलनामा गाईको संख्या बढी भए पनि अधिकांश गाई काठे (कम दूध दिने स्थानीय) छन्। गाईको तुलनामा भैंसीकै दूध धेरै उत्पादन हुन्छ। नेपालमा गोवध गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। त्यसैले गाईको संख्या बढी भए पनि प्रतिफल कमजोर भएकाले सरकारले उन्नत जातको गाई पालनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
संसारमा सबैभन्दा बढि के को मासु खाइन्छ सुगुरको, गाईको ? यी मध्येबाट तपाइले उत्तर छान्नु भएमा गल्ति हुनेछ । संसारको ६ अरब ६७ करोड जनसंख्या मध्ये ९२ करोड हिन्दुहरुले गाईको मासु खादैन्न र १ अर्ब ९० करोड इस्लामले सुगुरको मासु खादैन्न त्यसैले संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय मासु बाख्रा हो तर स्वास्थ्यको दृष्टीकोणले औसतमा हानिकारक पनि बाख्रा कै हो ।
मानिस रोगि बन्नुमा उपभोग गरिने मासु प्रायः ठूलो कारक बन्दछ । १ सय ग्राम सुँगुरको मासुमा १२३ क्यालरी र ४ ग्राम फ्याट हुन्छ । सुँगुरको मासुमा पनि हानिकारक तत्वहरु पाइन्छ । बाख्राको १०० ग्राम मासुमा १५६ क्यालरी र ८.३ ग्राम फ्याट पाइन्छ त्यसैले बाख्राको मासु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । बाख्राको मासुमा सुँगुरको मासु संग ठिक विपरीत गुण रहेको हुन्छ ।
गाईको १०० ग्राम मासुमा १३६ क्यालरी र ५.१ ग्राम फ्याट हुन्छ तर यसको फ्याटमा आधा प्रतिशत चाहि मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिने तत्व ओलिभ ववेल रहेको हुन्छ । गाईको फ्याटमा अमेगा तेलको मात्र पनि हुन्छ बिशेषतः गाइले घाँस खाने भएकोले गाईको मासुमा अमेगा ३ पाइन्छ र त्यो मुटुको लागि अति लाभदायक हुन्छ ।
PreviousPrevious post:हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन गर्ने अभियानमा औषधि सेवन गर्नेको संख्या ५० हजार भन्दा बडी
Next Next post:ड्रेन तथा सडकको स्तरोन्नती कार्यको शिलान्यास
यि महिलाले बेच्छिन् आफ्नो दूध, कमाउछिन लाखौ बडी बिल्डिरहरुले गर्छन् धेरै डिमाण्ड
गाईको तस्बिर घरको यस दिशामा राख्नुहोस् ,हटेर जानेछ तपाईको दुर्भाग्य….